बजार बढेसँगै ११ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च दरले वृद्धि
वैशाख १४, काठमाडौं । मंगलवार बजार बढेसँगै ११ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च दरले वृद्धि भएको छ ।
एक साता घटेको बजार मंगलवार ९३ अंकले वृद्धि भएको हो । कारोबारमा आएको २१६ ओटा कम्पनीमध्ये ११ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य उच्च दरले वृद्धि भएको हो ।
११ ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसदिन उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ८७७ पुगेको हो ।
त्यसैगरी बिशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत,महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९ दशमलव ९६, युनाइटेड इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८९, समिट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९ दशमलव ७५ प्रतिशत,मञ्जुश्री फाइनान्सको ९ दशमलव ६४ प्रतिशत,ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको ९ दशमलव ५० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ३१ प्रतिशत,छ्याङदी हाइड्रोपावर हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ९ दशमलव २९ प्रतिशत,उन्नति सहकार्य लघुवित्तको ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र युनाइटेड इदि मर्दी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
बजार बढ्न थालेसँगै ती ११ ओटा कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा खरीदकर्ता धेरै भएकाले शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।
अपर तामाकोशीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ८४७, बिशाल बजार कम्पनीको रू. ४ हजार २१५,महिला लघुवित्तको रू.२ हजार ५८३,युनाइटेड इन्स्योरेन्सको रू.७११, समिट लघुवित्तको रू. १ हजार ५८३, मञ्जुश्री फाइनान्सको रू. २१६, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको रू.२ हजार ६५० पुगेको हो ।
यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको रू. २७०, छ्याङदी हाइड्रोपावरको रू. २९४, उन्नति सहकार्य लघुवित्तको रू. २ हजार ४०० र युनाइटेड इदी मर्दीको शेयर मूल्य रू. २९० पुगेको हो ।